Madaxweyne Dooran Xaaf oo Cadaado lagu soo Dhaweeyey – Radio Daljir
Cadaado – Madaxweynaha dooran ee maamulka Galmudug, Axmed Ducaale Geelle Xaaf, iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa galabta lagu soo dhaweeyey magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Galmudug, waxaana madaxweynuhu safarkiisa hadda uu ka soo kicitimay magaalada Muqdisho oo uu todobaadkii ugu dambeeyey ku sugnaa.
Madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf ayaa soo dhaweyntiisa waxaa ka qaybgalay masuuliyiin kala duwan hay’adaha maamulka Galmudug ah iyo qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee magaalada Cadaado, kuwaasi oo huwanaa calanka caleemana lulayey.
Soodhaweyn kadib, Madaxweyne Xaaf waxaa uu ka hadlay arrimo dhawr ah oo ay ka mid ahayd imaatinkiisa galabta ee Cadaado iyo safarkiisii uu ku maqnaa oo ahaa mid qaatay muddo labo Asbuuc iyo dheeraad, kaasoo ay ku jirtay ka qaybgalkii shirkii Soomaalda quseeyey ee 10kii bishaan ka furmay magaalada London ee dalka Ingiriiska, socdayna labada maalmood.
Waa markii ugu horraysay oo madaxweyne Xaaf uu safar uga baxo Galmudug isagoo madaxweyne ah, kuna soo laabto, waxaana uu shacabkii soodhaweeyey ka dalbaday hadda kadib in la yareeyo soo dhaweynta si dhaqaalaha ku baxaya loogu qabto arrimo kale oo muhiim u ah dadka iyo deegaannada Galmudug.
Sidoo kale, waxaa uu shacabka Cadaado u soo jeediyey amniga in ay ka qaybqaataan, soona dhaweeyaan dadka martida ah ee caleemosaarkiisa u imaanaya Cadaado, caleemosaarkaasi oo la filayo in uu dhaco 29ka bishaan aynu ku jirno ee May.